ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ်ပါ ရယူခဲ့သူများ (၂)
1 Oct 2018 . 5:51 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမားအဖြစ်သာမက နည်းပြအဖြစ်ပါ ရယူခဲ့တဲ့ (၇)ဦးထဲက (၄)ဦးကို အပိုင်း(၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အခုက အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် . . .
၅. ထရာပတ်တိုနီ Trapattoni
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ထရာပတ်တိုနီရဲ့ နာမည်က သိပ်ပြီး မထင်ရှားတော့ပေမယ့် တစ်ချိန်တုန်းက သူဟာ အီတလီဘောလုံးလောကမှာ လေးစားခံရတဲ့ သူတစ်ဦးပါပဲ။ နောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ထရာပတ်တိုနီဟာ အေစီမီလန်အသင်းမှာ (၁၂)ရာသီကြာ ကစားခဲ့ပြီး ၁၉၆၃၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွေမှာ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်) ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ၁၉၈၄-၈၅ ရာသီမှာ ချန်ပီယံဆုဖလား ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Player – European Cup: 1963, 1969 (A.C. Milan)
Coach – European Cup: 1984–85 (Juventus)
၆.ဂွါဒီယိုလာ Pep Guardiola
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ အောင်မြင်မှု အများဆုံး နည်းပြတစ်ဦးလို့တောင် သတ်မှတ်ရမယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ Tiki-Taka ကစားဟန်ကို ချပြခဲ့သူ ဂွါဒီယိုလာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက (၁)နှစ်အတွင်း ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့ပြီး အဲဒီမှတ်တမ်းကို ဘယ်နည်းပြကမှ မယူနိုင်သေးဘူး။ ၁၉၉၁-၉၂ ရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံး ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်)ကို ရယူခဲ့စဉ်က ဂွါဒီယိုလာဟာ အဓိက ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သလို နည်းပြဘ၀မှာလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား (၂)ကြိမ် ရယူပေးခဲ့တယ်။
Player – European Cup: 1991–92 (Barcelona)
Coach – UEFA Champions League: 2008–09, 2010–11 (Barcelona)
၇ . ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff
နယ်သာလန်အသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ထာဝရ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ တစ်ခုရှိတာက ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်မှာ ကစားသမားဘ၀တုန်းက ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ အောင်မြင်မှု သိပ်မရပေမယ့် နည်းပြဘ၀မှာတော့ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာ အေဂျက်စ်အသင်းနဲ့အတူ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်) (၃)ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ပထမဆုံး ဥရောပဖလားကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
Player -European Cup: 1970–71, 1971–72, 1972–73 (Ajax)
Coach – European Cup 1991–92 (Barcelona)
Photo:squawka, football or whatever
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈပါ ရယူခဲ့သူမြား (၂)
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမားအဖွဈသာမက နညျးပွအဖွဈပါ ရယူခဲ့တဲ့ (၇)ဦးထဲက (၄)ဦးကို အပိုငျး(၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့ပွီး အခုက အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ . . .
၅. ထရာပတျတိုနီ Trapattoni
ဒီနခေ့တျေမှာတော့ ထရာပတျတိုနီရဲ့ နာမညျက သိပျပွီး မထငျရှားတော့ပမေယျ့ တဈခြိနျတုနျးက သူဟာ အီတလီဘောလုံးလောကမှာ လေးစားခံရတဲ့ သူတဈဦးပါပဲ။ နောကျခံလူတဈဦးဖွဈတဲ့ ထရာပတျတိုနီဟာ အစေီမီလနျအသငျးမှာ (၁၂)ရာသီကွာ ကစားခဲ့ပွီး ၁၉၆၃၊ ၁၉၆၉ ခုနှဈတှမှော ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ) ဆှတျခူးခဲ့တယျ။ နညျးပွဘဝမှာတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ ၁၉၈၄-၈၅ ရာသီမှာ ခနျြပီယံဆုဖလား ရရှိခဲ့ပါတယျ။
၆.ဂှါဒီယိုလာ Pep Guardiola
မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံး နညျးပွတဈဦးလို့တောငျ သတျမှတျရမယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့အတူ Tiki-Taka ကစားဟနျကို ခပြွခဲ့သူ ဂှါဒီယိုလာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက (၁)နှဈအတှငျး ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့ပွီး အဲဒီမှတျတမျးကို ဘယျနညျးပွကမှ မယူနိုငျသေးဘူး။ ၁၉၉၁-၉၂ ရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံး ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ)ကို ရယူခဲ့စဉျက ဂှါဒီယိုလာဟာ အဓိက ကစားသမားအဖွဈ ပါဝငျခဲ့သလို နညျးပွဘဝမှာလညျး ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလား (၂)ကွိမျ ရယူပေးခဲ့တယျ။
၇ . ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff
နယျသာလနျအသငျးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ထာဝရ သူရဲကောငျးတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူပါ။ တဈခုရှိတာက ယိုဟနျခရိုကျဖျမှာ ကစားသမားဘဝတုနျးက ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ အောငျမွငျမှု သိပျမရပမေယျ့ နညျးပွဘဝမှာတော့ သမိုငျးဝငျအောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ကစားသမားဘဝမှာ အဂေကျြဈအသငျးနဲ့အတူ ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ) (၃)ကွိမျရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ပထမဆုံး ဥရောပဖလားကို ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။